Carlos Ruiz Zafón: nnọgidesi ike nke mkpụrụ obi site na akwụkwọ ozi | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carlos Ruiz Zafón bụ otu n’ime ndị edemede a ma ama n’oge a na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụghị n'efu ka a na-ewere ya dị ka otu n'ime akwụkwọ ọgụgụ kachasị agụ n'ụwa, ọ bụ naanị Cervantes; nke a bụ ekele maka ọrụ ya kachasị pụta ìhè: Onyunyo ifufe (2001). Akwụkwọ ọgụgụ a mere ka ọdee akwụkwọ onye ode akwụkwọ, ndị nkatọ akọwakwaala ya: “…
Onye ode akwukwo nwere uzo nke ya, nke o chikotara akwukwo di iche iche. O weghaara ihe okike ya dị ebube nke mere atụmatụ ọ bụla en ihe pụrụ iche na-enweghị atụ. N’oge niile ọ na-arụ ọrụ ya, a sụgharịrị ya n’ọtụtụ asụsụ, ya na ya jisiri ike merie ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na ise, onye na-atụ anya mgbe niile akụkọ ya ndị pụrụ iche.
1 Ihe omuma ihe omuma
1.1 Ihe omumu mbu na akwukwo edemede
1.2 Mahadum ọmụmụ na ahụmịhe ọkachamara
2 Egwuregwu edemede
2.1 Oge mbido
2.2 Akwụkwọ nke Carlos Ruiz Zafón
3 Booksfọdụ akwụkwọ nke Carlos Ruiz Zafón
3.1 Onye isi nke alụlụ (1993)
3.2 Ndị agha mmiri (1999)
3.3 Onyunyo Ifufe (2001)
Na Fraịdee Septemba 25, 1964, obodo Barcelona hụrụ ọmụmụ Carlos Ruiz Zafón. Ndị ezinụlọ ya bụ nna ya, Justo Ruiz Vigo, onye ọrụ mkpuchi; nne ya, Fina Zafón, na nwanne ya nwoke nke okenye, Javier. Kemgbe ọ bụ nwata, o gosipụtara ọrụ dị ka onye edemede na echiche dị ukwuu. Ihe akaebe nke a bụ akụkọ peeji atọ o dere n'oge ọ bụ nwata, yana isiokwu nke ụjọ na ndị Martians.
Ihe omumu mbu na akwukwo edemede
Ọ gụsịrị akwụkwọ mbụ ya na kọleji ndị Jesuit: San Ignacio de Sarrià, ihe owuwu nke gbara ya ume maka ụdị Gothic. Mgbe ọ dị afọ iri na ise, ọ gụchara otu akwụkwọ dị narị peeji isii dabere na ihe omimi Victoria: Ulo oru Harlequin. E zigara ndị edemede dị iche iche ederede, mana ebipụtaghị ya. Site na ahụmịhe ahụ ka ọ hapụrụ ndụmọdụ bara uru nke onye editọ nke Edhasa: Francisco Porrúa.
Mahadum ọmụmụ na ahụmịhe ọkachamara
Ọ banyere Mahadum Kwesịrị Ekwesị nke Barcelona ka ọ mụọ sayensị sayensị. Mgbe ọ na-agafe afọ mbụ nke ọmụmụ ya, o tinyere akwụkwọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche. O jisiri ike were goro ya Dayax, ebe o si na onye ntinye aka gaa na copywriter. Mgbe e mesịrị, sooro ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa rụọ ọrụ, dị ka: Ogilvy, Tandem / DDB y Ndị otu Mc Cann World.
Na 1992, Ruiz Zafón kpebiri ịla ezumike nká na ngalaba mgbasa ozi ma rara onwe ya nye akwụkwọ niile. A) Eeh malitere ide ihe omimi na ihe omuma, nke mechiri otu ugbo mgbe emesiri: Onye Isi Uche. Na nkwanye enyi ya nwanyị, o nyefere ya ka asọmpi ahụ nke akwụkwọ okorobịa site na nkwusa Edebé, nke meriri. Tinyere onyinye a, ọ natara ihe bụ nnukwu ego maka oge ahụ.
Onye dere ya kpebiri itinye isi obodo nke ihe nrite maka ịchụso agụụ ya, sinima, yabụ kwagara n'obodo Los Angeles. Ozugbo biri ebe ahụ, malitere ide edemede, na-agbahapụghị ihe okike nke akwụkwọ akụkọ ya. N'oge na-adịghị anya, o bipụtara usoro nke usoro nke ọrụ mbụ ya: Etiti abalị (1994) na Ọkụ nke September (iri na itoolu na iri itoolu na ise); iji mezue Mgbaghara Fogi.
Na 1999, o gosipụtara Marina, akwụkwọ akụkọ onye edemede kọwara dị ka:… nke kasịnụ n'ime ọrụ ya niile”. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, o kpebiri ịkụ nzọ n'ihu ndị toro eto ma bido tetralogy Ebe a na-eli ozu nke akwụkwọ ndị echefuru echefu, na mbipụta nke Onyunyo ifufe (2001). Ngwa ngwa, ọrụ rere ihe karịrị nde 15 nke ụdị, nke mere ka ọrụ Spanish jikọtara ọnụ.
Carlos Ruiz Zafon nwụrụ na June 19, 2020 na Los Angeles (USA), mgbe ọ dị afọ 55 na mgbe ọ lụchara ọgụ afọ abụọ na ọrịa kansa nke eriri afọ.
Akwụkwọ nke Carlos Ruiz Zafón
Onye Isi Uche (1993)
Etiti abalị (1994)
Ọkụ nke September (1995)
Booksfọdụ akwụkwọ nke Carlos Ruiz Zafón
N'oge okpomọkụ nke 1943, onye na-eche nche Maximilian ogbu osisi le gwa nwunye ya Andrea na umu-ya ndikom —Alicia, Irina na Max— na ha ga-agagharị n'ógbè n’akụkụ osimiri Atlantic, iji chebe ha pụọ ​​na agha. Max enweghị obi ụtọ na mkpebi a, ebe ọ na-achọghị ịhapụ ụlọ ya. N’abalị bọtara ụbọchị, nna ya jisiri ike mee ya obi ụtọ mgbe ọ nyechara ya ọlaọcha ọlaọcha maka ụbọchị ọmụmụ ya.
N'ime njem ahụ, Maximilian malitere ịgwa ụmụ ya akụkọ ihe mere eme nke ụlọ, nke nwere oge gbara ọchịchịrị. Ogologo oge gara aga, nwa nke ndị nwe ya mbụ nwụrụ ma nwụọ n'ọnọdụ ndị ọzọ. Mgbe ogologo njem ahụ gasịrị, ndị Carvers rutere n'ụlọ ọhụrụ ha, ebe dị omimi na uzuzu uzuzu n'ihi ogologo oge na iji; ozugbo, ha na-amalite ịtọpu.
Ọnụ, ndị ezinụlọ ahụ na-enyere aka na-ehicha ihe, nke na-eme ka ike gwụ ha. Mgbe obere ezumike, Max, onye nwere nghọta na egwu, amalite na-edebe iju na spooky ọcha. Si ebe ahụ, nwa okorobịa a bie ndụ oge ọchịchịrị mgbe nzuko ya na onye ojoo: Onye isi nke alụlụụ, onye na-enye ihe chọrọ, mana na ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ.
Onye isi ụdọ ...
Oscar Drai laghachiri na Barcelona mgbe ọtụtụ afọ nke ndụ nke oge gara aga na-ata ahụhụ, ọ bụ ebe ahụ ka ọ kpebiri ịmalite ịkọ akụkọ ya. Ihe a niile mere mgbe ọ dị afọ iri na ise wee gbaa ọsọ pụọ n'ụlọ akwụkwọ ịbanye na obodo. Ọchịchọ ịmata ya mere ka ọ banye n'ụlọ ochie na Sarriá, ebe ọ hụrụ otu elekere akpa n'akpa uwe, nke ọ na-ewere mgbe ọ ga-apụ ngwa ngwa.
Oscar, dịtụ ụjọ, kpebiri ịlaghachi weghachi ihe ahụ, mana na-eju Marina anya, Onye na-akpọrọ ya na nna ya Germán. Ọ na-anabata mgbaghara nke nwa okorobịa ahụ maka iwere elekere ahụ. Mgbe ha na-akparịta ụka, ụmụ nwoke ahụ na-ezukọ iji gaa n'okporo ámá ndị dị na Barcelona, ​​wee si otú a mara ibe ha nke ọma. Ụbọchị na-esote, Marina kpọrọ Oscar gaa ebe a na-eli ozu, ebe ọ na-egosi ya otu ili.
Ili ahụ nwere ili ozu nwere ihe nru ububa ojii, aha ya. Ihe niche bụ nwanyị enigmatic na-eleta otu ugboro n'ọnwa, onye na-ahapụ naanị uhie uhie. N'ịbụ ndị nwere obi ụtọ, ndị na-eto eto na-enyocha ọnọdụ ọjọọ a, nke na-eduga ha na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-adịghị mma. N'ebe ahụ ka ha na-achọpụta ihe nzuzo dị egwu gburugburu onye nwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe: Mikhail Kolvenik.
Njem ahụ na-emenye ụjọ na-eduga ha na ndagide na akụkọ ọjọọ, dị oke egwu ma na nke ahụ ga-akara akara aka ha ruo mgbe ebighị ebi.
Marina (Ọ́bá Akwụkwọ Carlos ...
Na Barcelona dị jụụ mgbe njedebe nke esemokwu agha ahụ, nwa okorobịa ahụ Daniel Sempere na nna ya na-ejegharị na aka n'ebe ebe omimi. Nke a na-ewe ya gaa ebe a na-eli ozu akwụkwọ ndị e chefuru echefu; n'ebe ahụ ka ọ na-atụ aro họrọ akwụkwọ, nke ga-elebara anya dị ka a ga-asị na ọ bụ akụ. Ọ masịrị Daniel, ya ahọrọ ihe ederede a kpọrọ Onyunyo ifufe, nke Julián Carax dere.
Mgbe m ruru ụlọ, ngwa ngwa gụọ akwụkwọ ahụ ma bụrụ onye akụkọ akụkọ ga-asụpe, ya mere o kpebiri ịchọ ihe ọmụma banyere onye edemede ahụ, ma o siri ike na onye ọ bụla maara ya. N'oge na-adịghị, ọ na-abanye na Laín Coubert, nwoke di omimi onye choro ibibi oru nile nke Carax. Ihe a dị ịtụnanya gbalịsiri ike inweta ụdị nke Daniel nwere.
Mgbe Daniel gara n'ihu nyocha, ọ na-etinye aka na mgbagwoju anya nke gbara onye edemede ahụ gburugburu. Si ebe ahụ —n'etiti oge gara aga na ugbu a- ọtụtụ ihe odide ndị metụtara ihe omimi ahụ malitere ịpụta. Dị ka a ga-asị na ha bụ iberibe a mgbaghoju anya, akụkọ ọ bụla dabara n'ụzọ zuru oke elu finalmente dozie niile ihe aghụghọ gbara gburugburu ibé.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Carlos Ruiz Zafón: akwụkwọ
Akwụkwọ nke JJ Benítez